Fedora 26 ga-akwụsị ịnweta nkwado na June 1, melite ugbu a | Site na Linux
Fedora 26 ga-akwụsị ịnweta nkwado na June 1, melite ugbu a
Ihe oru Fedora kwuputara taa na Fedora 26 ga-akwụsị ịnweta nkwado zuru oke na June 1, 2018, na-akpọ ndị ọrụ niile nke nsụgharị sistemụ nke usoro a ka ha melite iji chekwaa nchekwa na nkwụsi ike.
Ọnwa iri na otu gara aga Fedora 26 ka ahapụpụtara ya na GNOME 3.24 dị ka ebe ngosi ihe osise na njikwa ngwugwu DNF 2.5, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchịkọta 10,000 ka bipụtara site na mmalite ya ruo na June 1, mgbe nkwado gọọmentị kwụsị.
Mgbe June 1 gasịrị, Ndị ọrụ Fedora 26 agaghị enweta mmelite ọ bụlaEnweghi nchedo nchekwa, enweghịzi ndozi ahụhụ ma ọ bụ mmelite, ọ bụ ya mere onye ndu ọrụ Fedora ji kwado nkwalite na Fedora 28 ma ọ bụ 27 tupu ụbọchị akara.
Nweta nkwalite na Fedora 28 ugbu a
Ndị ọrụ ka nwere Fedora 26 nwere ụbọchị 2 (taa na echi) iji melite ụdị nke kachasị ọhụrụ, Fedora 28, ọ bụ ezie na nhọrọ iji kwalite na Fedora 27 dịkwa, mbipute a ga-akwado maka ọnwa isii ọzọ ruo mgbe ntọhapụ nke Fedora 29.
Iji melite Fedora 26 na ụdị ọhụụ ị nwere ike ịgbaso nkuzi nke otu ndị mmepe Fedora mere na ibe akwụkwọ. Ọ dị ngwa na ndị ọrụ Fedora 26 niile melite ozugbo enwere ike iji zere nsogbu ọ bụla na nke kachasị mkpa, ịchekwa kọmputa ha.
A na-atụ aro ka ị kwalite na Fedora 28 ozugbo ọ bụ ụdị dị elu karịa Fedora 27 ma nwee opekata mpe otu afọ nkwado, ruo oge ọkọchị nke 2019. Fedora 28 na - eweta GNOME 3.28, Linux Kernel 4.15, yana ihe ndị ọzọ emelitere.
Ọ bụrụ na ịnweghị nkwenye iji Fedora 28 cheta na ị nwere ike ịmepụta ụdị a na-eme na USB iji nwalee akụkọ kachasị ọhụrụ na-enweghị ntinye, ọ bụ ezie na anyị na-akwado mmelite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Fedora 26 ga-akwụsị ịnweta nkwado na June 1, melite ugbu a
Aha ya bụ José dijo
Naanị ihe ọjọọ banyere Fedora (Kachasị MKA) bụ gnome…. Enweghị m mmasị na Spins nke Fedora na-enye…. Na mpụga nke ahụ, Fedora bụ nnukwu ọgba aghara
Zaghachi José José
Ihe dị mma banyere Fedora bụ na o nwere nkwado karịa ubuntu (Non LTS),
Genymotion: emulator Android ngwa ọdịnala na GNU / Linux
Ntuziaka GUI mkpịsị aka: ngwa maka ndị na-agụ akara mkpisiaka na Ubuntu